म अहिले इजरायलमा छु, मलाई श्रीमान चाहियो ? -
April 22, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on म अहिले इजरायलमा छु, मलाई श्रीमान चाहियो ?
म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो ।
किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल १ अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए, भोलि उनीहरूको उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ तन्किने होइन, बरु म यहाँ केटाकेटी स्याहारेर बस्छु, तिमी जाऊ इजरायल र हाम्रो पनि आर्थिक हैसियत अलि उकासौँ ।
किन नजाने गाउँको बाटै नसोध्नू भन्छ्यौ रु हामीले कहिले आफ्नो घर बनाउने रु सधैँ यही तीन कोठामा जिन्दगी बिताउने रु भोलिका दिनमा छोराछोरीको बिहे पनि त गर्नुपर्छ । सोच न १
तिमी तीनचार वर्ष बसिहाल्छ्यौ, हाम्रा योजनाहरू पूरा गर्न पैसा त भइहाल्छ नि, ‘।।
मैले अब पैसा पठाउँदा श्रीमानलाई भन्न थालिसकेकी थिएँ पैसा बचत गर्नु ल भनेर । एक दिन श्रीमान्ले फोनमार्फत् मलाई भन्नुभयो, साथीहरूले मिलेर एउटा १० ं २ सम्म पढाई हुने स्कूल चलाउने रे । हामीलाई पनि पैसा हाल्न भनेका छन्, तिमी त्यहाँबाट ऋण गरेर भए पनि मलाई १० लाख पठाइ देऊ न ।
मलाई साथीहरूको कर्जा तिर्न दस महिना लाग्यो । ११ महिनाको तलव थापेको पनि थिइनँ, श्रीमान्को फोन आयो( स्कूलको क्यन्टिनमा आफँ लगानी ग¥यो भने त अझ बढी आम्दानी हुन्छ, फेरि यताउता गरेर एकमुुष्ट पैसा पठाइ देऊ न । सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको श्रीमान्माथि मैले कसरी शङ्का गर्ने ? मैले होला भनेर फेरि ऋण गरेर छ लाख पठाइदिएँ ।
त्यो दिन फागुपूर्णिमा थियो, छोराले फोनमा र रुँदै भन्यो मामू बुबाले बर्बाद गर्नुभो । के भयो किन रोएको के गर्नु भो बुबाले( मैले आतालिँदै सोधेँ ? फोनमा छोरीको पनि आवाज आयो । मामू बुबाले त अर्को बिहे गर्नुभएको रहेछ । आज रक्सी खाएर एउटा सानो बच्चालाई लिएर आउनुभएको थियो ।
म इजरायलबाट तुरुन्त आउन सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ । मेरो टाउकामा कर्जा थियो । नेपाल आएर के गर्ने रु मैले माइतीमा फोनगरेर भाइसित रोएँ । भाइलाई स्कूलमा लगानी के कति छ बुझ भनेपछि उसले के कसरी बुझ्यो मैले पठाएको पैसा त स्कूलमै लगानी त भएको रहेछ तर शेयर होल्डर त कान्छी श्रीमती पो भएकी रहिछ ।
पढाइमा मन लगाऊ भनेर तर उनीहरूको पढाइ के भयो होला रु मैले जतिसक्दो चाँडो कर्जा तिरेर नेपाल फर्किने विचार भाइलाई भनेँ । भाइले भन्यो दिदी हामी भान्जाभान्जीलाई हामीकहाँ ल्याएर राख्छौँ, तिमी भोलिको दिनलाई पनि केही व्यवस्था गरेर मात्र फर्क ।
यसैबीचमा छोरीले एस। एल। सी। पास गरिन् । मलाई ज्यादा पीर छोराको थियो, कुलतमा लाग्ने पो हो कि भन्ने । मेरो त सब बर्बाद भैसकेको थियो । मलाई आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो भैरहेको थियो । विवाह गरेको दिनदेखि अहिलसम्म मेरा श्रीमान्ले मलाई गरेको माया, मसित सरसल्लाह, भावी योजना सबै मेरा सामु सिनेमाझैँ नाचिरहेका थिए ।
एक मन भन्छ समय अनुसार चल्नुपर्ने मान्छेको नियती हो । जब मान्छेलाई सत्यबोध हुन्छ, उसलाई कुनै कुराले दुखाउँदैन, मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ । जिन्दगी एकपल्ट मिल्छ, एउटा असल व्यक्तिसित विवाह गरूँ कि १ जब श्रीमान्को जरुरत बढी पर्छ त्यो बेला मलाई श्रीमान्ले धोका दिएको थियो भने मैले उसको नाम लिएर किन बस्ने ?
तर समस्या केटालाई केटी फकाउन सजिलो हुन्छ होला र त दोस्रो विवाह सजिलै गर्छन् तर म कसलाई भनूँ, मसित विवाह गर्छौ भनेर । के भन्ने रु एक जना सासूलाई नयाँ श्रीमान् चाहियो रु मलाई धोका दिने श्रीमान्लाई देखाउनलाई भए पनि म अर्को विवाह गर्न चाहन्छु । तर कोसित ‘ ।
यूवा नेता कुमार लुइटेलले थालेको विरामी बचाउ अभियान समापन, १४ गते रकम हस्तान्तरण गरिने
जान्नुहोस यी ९ वटा मन्त्र : जसले मानिसको जीवन नै परिवर्तन हुन्छ !
‘लकडाउन अचुक अस्त्र होइन’-मित्रसेन दाहाल
May 9, 2020 May 9, 2020 अखवार अनलाइन
स्रष्टा र सिर्जना कार्यक्रममा गुञ्जिइन् शान्ति शर्मा, एकल कवितावाचन सम्पन्न
January 2, 2020 January 3, 2020 अखवार अनलाइन